မင်းကောင်းချစ် | MoeMaKa Burmese News & Media
>Fund Rasing for Project Help Burma held yesterday
>Burmese Rakhine Community in SF Bay to host Food Fair to help Giri Victims
ငြိမ်းချမ်းအေး - နာဇီ ပါတီ ဗမာပြည်
Posts Tagged ‘ မင်းကောင်းချစ် ’
မင်းကောင်းချစ် – “ ကောင်းခြင်းများရှင် ဒေါင်းမင်းတရားသခင်”
မင်းကောင်းချစ် – “ ကောင်းခြင်းများရှင် ဒေါင်းမင်းတရားသခင်” (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၅  အောင်ဆန်းဘွဲ့ ကဗျာသီ နီပါရဲ့ သူ့ သွေး ကြောက်မွှေးမျှင် တပင်မသန်း သေလမ်းလဲ သူမထီ...
မင်းကောင်းချစ် – “ ကျောင်းသားဆိုတာ”
မင်းကောင်းချစ် – “ ကျောင်းသားဆိုတာ” (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၅  ကျောင်းသားဆိုတာ…. ဖေါက်ပြန်သူတွေလို … ပေါင်းမစားဘူး ။  ကျောင်းသားဆိုတာ …. ပုတ်သင်ညိုတွေလို အရောင်…....
မင်းကောင်းချစ် – “ ကျောင်းသားဆိုတာ” (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၅  ကျောင်းသားဆိုတာ…. ဖေါက်ပြန်သူတွေလို … ပေါင်းမစားဘူး ။  ကျောင်းသားဆိုတာ …. ပုတ်သင်ညိုတွေလို အရောင်…....
မင်းကောင်းချစ် – ခြင်းကြားကြီးနဲ့ရေသယ်နေတဲ့တိုင်းပြည်
မင်းကောင်းချစ် – ခြင်းကြားကြီးနဲ့ရေသယ်နေတဲ့တိုင်းပြည် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၄ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတဲ့နောက် စစ်ရဲ့အထုအထောင်းဒါဏ်ကို နိုင်ငံပေါင်းများစွာဟာ အလူးအလဲ ခံခဲ့ကြရတယ်။ စစ်နိုင်တဲ့ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်စတဲ့ နိုင်ငံတွေတောင်...
မင်းကောင်းချစ် -“ လူသတ်လိုင်စင် ” (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၆၊၂၀၁၄ အလွတ်သတင်းထောက်ကိုပါကြီး(ခ)ကိုအောင်နိုင်ကို မြန်မာစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ သတင်းဟာ…မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် ကျယ်လောင်တဲ့အချက်ပေး ခေါင်းလောင်းသံ နောက်တခုပါ။ ကိုပါကြီးဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူဘဲဖြစ်..မြန်မာနိုင်ငံသားယောက် အခုလို ကြက်ကလေး...
မင်းကောင်းချစ် – စစ်ဒီမိုကရေစီဒလံနဲ့ အလံရှူး …မြူးတူးပျော်လောင်မြိုက် နိုင်ငံရေးဖလံမိုက်ကယ် ပြောင်ပြောင်မြင် ရွှေထင်မိတော့ မီးကျွမ်းသင့်တူး
မင်းကောင်းချစ် – စစ်ဒီမိုကရေစီဒလံနဲ့ အလံရှူး …မြူးတူးပျော်လောင်မြိုက် နိုင်ငံရေးဖလံမိုက်ကယ် ပြောင်ပြောင်မြင် ရွှေထင်မိတော့ မီးကျွမ်းသင့်တူး (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၄ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) က ပါမောက္ခချုပ် ဦးကျော်ဦးက...
မင်းကောင်းချစ် – အ၀ိဉာဏက လုပ်သား (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၉၊ ၂၀၁၄ ဥပဓိရုပ်ကဆိုးဆိုး မီးခိုးတွေ မှုတ်လိုမှုတ် ဗလခပ်တုပ်တုပ်နဲ့ ဂီလာန ဇီဇာကကြောင်…ပေတူးတူးအကောင်။ ပထ၀ီမှတပါး ဓါတ်ကြီးသုံးပါး သူအကုန်ဝါးတယ်။ ဟိုနေ့ကဘဲ သူ့ရင်ကိုခွဲ...
မင်းကောင်းချစ် – “ကတညူ နဲ့ ကတဝေဒီ”
Photo – Google Image Search မင်းကောင်းချစ် – “ကတညူ နဲ့ ကတဝေဒီ” (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၇၊ ၂၀၁၄ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ မကြာခင်ရောက်တော့မယ် ။ ဗုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ…သတ္တမမြောက်ဝါကို တာဝတိန်သာနတ်ပြည်မှာ...
မင်းကောင်းချစ် -“ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေး ” သြဂုတ် ၁၂၊ ၂၀၁၄ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလါး….ဆွေမျိုးမယားအလျှံပယ် အပင်းဟတ်ရေးလါး ပြည်သူနဲ့ မေတ္တာ ကူးပြန်မလါး……ပြည်သူရဲ့ကျိန်စာ စူးခံမလား ပြည်သူကိုဆလံပေးမလား…..ပြည်သူကို ကျည်ဆံပေးမလါး ချွေးလူးတဲ့ထမင်းစားမလါး……သွေးလူးတဲ့ထမင်းဝါးမလါး ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးမွေးမလါး…..အဂတိတရားလေးပါးရွေးမလါး ဘားတိုက်ပြန်မလား….တရားမိုက်ထန်မလါး အကြည်အသာနဲ...
မင်းကောင်းချစ် – “နိင်ငံတော်ဆိုတဲ့လူတွေ… မီဒီယာကို အညွှန့် မချိုးပါနဲ့ ”
မင်းကောင်းချစ် – “နိင်ငံတော်ဆိုတဲ့လူတွေ… မီဒီယာကို အညွှန့် မချိုးပါနဲ့ ” ဇူလိုင် ၂၉ ၊ ၂၀၁၄ တို့ တိုင်းပြည်ကို နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ လူတန်းစားတရပ်က ဒုက္ခပေးနေတာ နှစ်ပေါင်း(၅၀)ကျော်ခဲ့ပြီ ။ သူတို...
မင်းကောင်းချစ် – “ ရှစ်လေးလုံး..ကမ္ဗည်း ” ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၄  ရှစ် …… ရှစ်သောင်းလေးထောင်အစု… ယူဇနာအထု…မြေပန်သုကို… သွက်သွက်ခါစေ…တုန်လှုပ်စေတဲ့ ဒီမိုငလျှင် ဥဒါန်းတွင်ရစ် သမိုင်းသစ်ပန်းချီ…ရွှေဝါပြည်… တရွာလုံးနီ…တမြို့လုံးရဲ...
မင်းကောင်းချစ် – အာဇာနည်နေ့ 
အာဇာနည်နေ့မင်းကောင်းချစ် ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၄ စိန်တောင်…စိန်သွား… ယုံကြည်ခြင်းတရား…ဘောင်ကျက်ထားတဲ့… ပြည်သူ့ နှလုံးသား…ကင်းဘတ်ပြားပေါ်မှာ… အောင်ဆန်းနဲ့…အာဇာနည်တွေ… ရဲရင့်စွာဖန်ဆင်း… စုတ်ချက်ပြင်း…ပန်းချီကား… တောက်တောက်ကြွားကြွား…ခန့်ခန့်ညားညား ပျိုမြစ်နီမောင်း…သမိုင်းသစ်လောင်းဆဲ…။ အဲဒီ့…မှော်ဝင်ပန်းချီကားကို… သူခိုးစစ်ဓါးပြ…လူပွေ… အမျိုးမစစ်သ…သူတွေက…...
မင်းကောင်းချစ် – ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး
ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး မင်းကောင်းချစ် ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၄ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့၊ တနည်းအားဖြင့် ဥပဒေလမ်းကြောင်းနဲ့အညီ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ အဓိကကျတဲ့ ပုဒ်မက ...
မင်းကောင်းချစ် – “ကတ္တီပါဖုံး စစ်ခွါတုံးအောက်က ပြည်သူ့ ဘ၀လုံခြုံမှု့”
“ကတ္တီပါဖုံး စစ်ခွါတုံးအောက်က ပြည်သူ့ ဘ၀လုံခြုံမှု့” မင်းကောင်းချစ်၊ ဇွန် ၂၁၊ ၂၀၁၄ မမှန်ကန်တဲ့ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံစနစ်နဲ့ မမှန်ကန်တဲ့သူတွေဗိုလ်ကျအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဥပဒေစိုးမိုးမှု့မရှိနိုင်သလို မတရားမှု့တွေ အနိဌာရုံတွေဆိုတာနေ့ တဓူဝ တောရောမြို့ပါမကျန်နေရာမလပ်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိတယ်။ မိုးလင်းကမိုးချုပ် အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ နိုးထ...
“ သံမဏိလိပ်ပြာ “ မင်းကောင်းချစ်၊ ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၁၄ တော်လည်းတုန်ဟီး၊ ရှစ်လေးလုံးဘီးကြီးရုန်းကြွ အဖိနှိပ်ခံတို့ကုန်းထခိုက် တုံးတိုက်တိုက်၊ ကျားကိုက်ကိုက် ဖုတ်ရထားကြီးလည်း ဆိုက်လာခဲ့။ ထီးလိုမင်းလို၊ ပြည်သူငိုပေါ့ လက်သည်းဆိတ်တော့...
မင်းကောင်းချစ် – ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများနောက်က ကိုယ်ပျောက်တစ္ဆေကြီးများ
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများနောက်က ကိုယ်ပျောက်တစ္ဆေကြီးများ မင်းကောင်းချစ် ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၁၄ သဘာဝသယံဇာတတွေကြွယ်ဝပြီး၊ ရွှေရောင်ပုထိုးတွေ အမြောက်အများရှိတဲ့အရပ်မို့ ရွှေနိုင်ငံလို့ တင်စားခံရတဲ့ တို့တိုင်းပြည်ဟာ ကံဆိုးစွာဘဲ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ စစ်သံပချုပ်ထဲ အလိုမတူဘဲ သက်ဆင်းခဲ့ရတာ အများအသိပါ။...
ကျူးကျော်သူ (Min Kaung Chit)
ကျူးကျော်သူ မင်းကောင်းချစ် မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၁၄ ပြည်တွင်းကလာတဲ့သတင်းတွေနဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဆင်းရဲသားပြည်သူတွေနဲ့တောင်သူလယ်သမား တွေကို ရဲ၊စစ်တပ်နဲ့ စည်ပင်သာယာတို့ကကျူးကျော်သူတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးအတင်းမောင်းထုတ်နေတဲ့သတင်းတွေ ဘူဒိုဇာတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့တဲလေးတွေကိုကော်ထိုးဖျက်ဆီးနေတာတွေ၊ ခပ်စပ်စိပ်ဖတ်ရှုလာရ၊ကြားနေရတယ်။ တော်တော့်ကို စိတ်မချမ်းမြေ့စရာပါ။ အဲဒါနဲ့ကျူးကျော်သူဆိုတဲ့စကားရပ်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားမိတယ်။ ကျွန်တော်တွေးမိသလောက်ကတော့ ဥပဒေကြောင်းအရကိုယ်မပိုင်ဆိုင်တဲ့ (သို့)...